Nwaanyị nke nnabata na ntinye uche n'ihe mgbu asaa ahụ
PBỌR SE asaa nke MARY
Ndị nne nke Chukwu kpughere Saint Brigida na onye ọ bụla gụrụ asaa “Ave Maria” otu ụbọchị tụgharịa uche na mgbu na anya mmiri ya ma gbasaa ofufe a, ga-enweta uru ndị a:
Udo n’ime ezinụlọ.
Nghọta banyere ihe omimi nke Chukwu.
Nnabata na afọ ojuju nke arịrịọ niile oge ha nọ dịka uche Chineke si dị na maka nzọpụta nke mkpụrụ obi ya.
Ọ joyụ ebighi ebi n’ime Jizọs na Meri.
NKWUP FIRSTTA NKE MB The: Nkpughe nke Simiọn
Simeon gọziri ha ma gwa nne ya okwu Meri, sị: «Ọ nọ ebe a maka mbibi na mbilite n’ọnwụ nke ọtụtụ n’Izrel, ihe ịrịba ama nke ihe mgbagha maka echiche nke ọtụtụ obi. Gị onwe gị kwa, mma agha ga-amata mkpụrụ obi ”(Luk 2, 34-35).
Nke abụọ: Iji gbaga Egypt
Otu mmụọ ozi nke Jehova pụtara n'ihu Josef na nrọ wee sị ya: "Bilie, kpọrọ nwatakịrị ahụ na nne ya gbaga Ijipt, nọrọ ebe ahụ ruo mgbe m ga-adọ gị aka na ntị, n'ihi na Herọd na-achọ nwatakịrị ahụ igbu ya." Josef we teta kpọta nwa-ya nwoke na nne-ya n'abali we b toalaga n'Ijipt.
Nke atọ: Ọnwụ Jizọs na temple
Jizọs nọgidere na Jerusalem, na-enweghị nne na nna mara. N'ikwere ya n'ụgbọ njem ahụ, ha mere njem ụbọchị, wee malite ịchọ ya n'etiti ndị ikwu na ndị maara gị. Mgbe ụbọchị atọ gasịrị, ha hụrụ ya n'ụlọ nsọ ebe ọ nọ ọdụ n'etiti ndị dọkịta, na-ege ha ntị ma na-ajụ ha ajụjụ. O juru ha anya hu ya na nne ya si ya, Nwa m, gini mere I jiri mee anyi ihe a? Lee, mụ na nna gị achọgharịwo gị nke ukwuu. "
Nke anọ: Nzute e zutere Jizọs n'ụzọ na Calvary
Unu nile ndi na agbada n’okporo ụzọ, tulee ma lelee ma enwere ụdị ụfụ m na-enwe. (Lm 1:12). “Jisos huru nne ya ka ha no n’ebe ahu” (Jon 19:26).
NKE BANYERE: Nnanwu na onwu nke Jisos.
Mgbe ha ruru ebe akpọrọ Cranio, ha kpọgidere Ya na ndị omekome abụọ ahụ, otu onye n'aka nri, nke ọzọ n'aka ekpe. Pailat me-kwa-ra ihe edere, we debe ya n’elu obe; edewo “Jisos onye Nazaret, bu eze ndi Ju” (Lk 23,33:19,19; Jon 19,30:XNUMX). Mb aftere ọ natasiri manya-vine ahu, Jisus we si, Emewo ha. O we kpọ isi ala, kubie ume. (Jọn XNUMX)
SIXTH PAIN: Onyunye Jisos n’aka Meri
Giuseppe d'Arimatèa, onye otu Sanhedrin nwere ikike, onye na-echekwa alaeze Chineke, were obi ike gaa Paịlet ịrịọ maka ozu Jizọs. n'ime ili gwuru na nkume. Mgbe ahụ, ọ furu okwute n'ọnụ ụzọ ili ahụ. Ka ọ dị ugbua, Meri nke Magdala na Meri nne Ioses nọ na-ele ebe edobere ya. (Mk 15, 43, 46-47).
Nkeji asaa: olili ozu Jizọs na naanị ya bụ Meri
Nne ya, nwanne nne ya, Meri nke Cleopa na Meri nke Magdala, guzoro n’elu obe nke Jizọs. Mgbe Jizọs hụrụ nne na onye na-eso ụzọ nke ọ hụrụ n'anya guzo n'akụkụ ya, ọ sịrị nne, "Nwanyi, lee nwa gị!" Mb hee ahu Ọ si onye ahu nke n discipleso uzọ-Ya, Le, nne-gi! Ma site na oge ahụ onye ahụ na-eso ụzọ kpọbatara ya n'ụlọ ya. (Jn 19, 25-27).
NOVENA NKE PENEN PAIN MARY PAINFUL
1. Nwanyị nwanyị Martyrs, Meri na-ewute, maka ngbachi obi na mgbu ahụ nke dakwasịrị gị mgbe Simiọn buru amụma banyere agụụ nwa ya na ọnwụ ya, a na m arịọ gị ka o mee ka m mara banyere mmehie m na nguzosi ike agaghị. emehie ọzọ. Ave Maria…
2. Nwanyị nwanyị Martyrs, Meri nwere mwute, maka ihe mgbu ị nwere mgbe mmụọ ozi gwara gị mkpagbu Herọd na ụgbọ elu Ijipt, a na m arịọ gị ka inye m ngwa ngwa ka m merie mwakpo nke Onye Iro na ebe e wusiri ike gbazinyere mmehie ahụ. Ave Maria…
3. Nwanyị Nwanyị Martyrs, Meri nwere mwute, maka ihe mgbu ahụ kpochapụrụ gị mgbe nwa gị nwụrụ n'ụlọ nsọ na ụbọchị atọ ike gwụrụ gị ịchọ ya, anam arịọ m gị ka m ghara ịhapụ ịgbaghara amara nke Chineke na nnọgidesi ike na ijere Ya ozi. Ave Maria…
4. Nwanyị nwanyị Martyrs, kpasuru Meri iwe, maka ihe mgbu ị nwetagoro mgbe a wetaara gị Ọkpara gị, a na m arịọ gị ka ịgbaghara m maka ihe ọjọọ a mere na ịzaghachi oku Chineke ozugbo. Maria ...
5. Nwanyị Nwanyị Martyrs, Meri na-ewute, maka ihe mgbu mere gị mgbe ị zutere Nwa gị ọbara ọbara n'okporo ụzọ na Calvary, a na m arịọ gị na m ga-enweta ike zuru oke ịnagide nhụjuanya ma mata echiche nke Chineke n'ihe omume niile. Maria ...
6. Nwanyị Nwanyị Martyrs, Meri na-ewute, maka mgbu ị tara na Ọnwụ Nwa gị, a na m arịọ gị ka m nata Oriri Nsọ n’ụbọchị ọnwụ wee tinye mkpụrụ obi m n’aka gị. Ave Maria…
7. Nwanyị nwanyị Martyrs, Meri nwere mwute, maka ihe mgbu nke dakwasịrị gị mgbe ị hụrụ nwa gị ka ọ nwụrụ ma mechaa lie ya, m na-arịọ gị ka ịpụpụ m n'ịchọ ihe niile dị n'ụwa ma na-achọsi ike ịbịa too gị ruo mgbe ebighi ebi n’eluigwe. Ave Maria…
Ka anyị kpee ekpere:
Chineke, onye, ​​iji gbapụta mmadụ site na aghụghọ nke ajọ onye ahụ, jikọtara nne ahụ na-eru uju na agụụ nke Ọkpara gị, mee ka ụmụ nile nke Adam, gwọọ site na mmetụta ọjọọ nke ikpe ọmụma, na-ekere òkè na ihe e kere eke dị ọhụrụ na Kraịst. Mgbapụta. Ya onwe ya bu Chukwu ma di ndu, n’eso gi n’otu n’otu nke Mmuo Nso rue mgbe nile. Amen.
← Na post gara aga Gara aga post:Pope Francis na-agwa ndị na-eto eto nke Medjugorje: kwe ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nwee mmụọ nsọ
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa banyere obi willing dị njikere ịsị eziokwu siri ike